Home News Hogaanka Dalka Wa Kuwa An Ku Qasaarnay ee Alow Amurahena Sahal
In Adigo Madaxweyne ah dadka ad madaxweynaha u tahay ay kaa sugayan hogaamin Wanagsan in hogaamintaada ad u dhiibato dad an lo idman waa ayan daro Madaxweyne.
Bulshada Soomaaliyeed aya qaba aragtida ah in ay ku qasaareen Hoganka talada haya ee Madaxweyne Farmaajo iyado ay dhaceyn go’aano wax yeelo gaarsiyay qaranimada Soomaaliya iyo in lagu xad gudbay Dimuquradiyada iyo Dowladnimada.
Awoda dalka aya waxa maamusha Shaqsiyaad saxibo ahan lo keensaday kuwaasi oo dalka ka sameya xad gudub ka dhan ah Siyaasiyinta,Iyo Bulshada qeybaheda kala duwan.
Shaqsiyadkasi aya isticmaala awoda dalka xili madaxweynaha uu u hoyaado Xarunta Gaashaandhiga iyado madaxtoyada ay maamulan rag ka shaqeya Xafiisyada madaxweynaha iyo Raiisul Wasaaraha iyado Kheyre iyo Fahad yasiin ay hogaamiye u yihin.
Dalka aya waxa hada ka tagan Boob xoogan oo ay wadan dowladaha deriska la’ah soomaaliya xili dadkii ku shaqada laha ay ku mashquul san yihin mooshino.